Mihahenjana Ny Toe-draharaha Ao Kashmir Taorian’ny Nahafatesan’Ireo Mpanao Fihetsiketsehana, Miaramila Ary Ireo Ahiana ho Mpitolona Mitam-Piadiana · Global Voices teny Malagasy
Mihahenjana Ny Toe-draharaha Ao Kashmir Taorian'ny Nahafatesan'Ireo Mpanao Fihetsiketsehana, Miaramila Ary Ireo Ahiana ho Mpitolona Mitam-Piadiana
Voadika ny 09 Avrily 2018 18:02 GMT
Vondrom-behivavy miandry eo ivelan'ny toerana masina iray mba hijery ny fatin'ilay mpitari-tolona mitam-piadiana tao an-toerana maty nandritra ny fifampitifirana tamin'ireo tafi-panjakana tao Jammu sy Kashmir. Sary tao amin'ny Instagram avy amin'ny mpanoratra.
Nihahenjana indray ny toe-draharaha tao Kashmir, fanjakana tantanan'i India, izay nahitana ny hetsika mpitaky fizakantena ampolony taona maro, taorian'ny andiana herisetra nahafatesana olona.
Ahiahiana ho mpitolona mitam-piadiana miisa telo ambinifolo no maty tamin'ny fifampitifirana telo samihafa nifanaovana tamin'ny tafi-panjakana nandritra ny hetsika miady amin'ny fitolomana mitam-piadiana tany amin'ny faritra rotiky ny ady tamin'ny Alahady 1 Aprily 2018 lasa teo. Miaramila Indiana miisa telo ihany koa no maty nandritra ny ady.
Tamin'io fotoana io, nipoaka ny fifandonana teo akaikin'ireo toerana roa raha nikasa ny hanakana ny bemidin'ny tafika Indiana ireo mponina ary nanampy ireo mpikomy handositra. Fotoana fohy taorian'ny nipoahan'ny vaovao momba ny nahafatesan'ireo olona miisa 13, nidina an-dalambe ireo mpanao fihetsiketsehana, izay tanora ny ankamaroany. Sivily efatra noho izany no namoy ny ainy rehefa nitifitra azy ireo ny tafika Indiana tany amin'ny tanànakelin'i Dialgam sy Kachidoora any atsimon'i Kashmir.
Toy izao no niseho tao amin'ny gazety taorian'ny rà mandriaka
Sivily iray hafa no maty taty aoriana tao amin'ny distrikan'i Gandarbal nandritra ny fifandonana tamin'ny polisy tao an-toerana rehefa tonga tao an-toerana ny hetsi-panoherana. Nilaza ny polisy tao an-toerana tamin'ny voalohany fa voadona io olona io nandritra ny fifandonana, saingy nandà izany ny dokotera satria nahitana ratra vokatry ny tifitra teo amin'ny lohany.
Novonoin'ny tafika Indiana. Gowhar Rather, 22 taona, niaina farany tao SKIMS. Nahitana bala tao anaty karandohany. Nofinofy iray hafa nesorina tao anaty foniny. Fianakaviana iray hafa no rava. Misaona i #Kashmir.
Namela zaza kamboty 17 volana ny iray tamin'ireo sivily maty tao Shopian. Niantso an'i Kashmir ny voina.
Ary araka ny nolazain'ny fianakaviana, maty ihany koa ny sivily Mushtaq Ahmad Thakur nandritra ny fifampitifirana rehefa nilaza taminy ireo tafika Indiana mba hitarika azy ireo any amin'ny trano iray tsy lavitra teo izay niafenan'ireo ahiahiana ho mpitolona.
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, niantso ity andro nahafatesan'ny ahiahiana ho mpikomy ity ho “andro manokana ho an'ny hetsika iadiana amin'ny fampihorohoroana” ny tafika Indiana mba hamaliana faty ny famonoana an'i Lietnà Ummar Fayaz Parry, izay hita tao amin'ny tanànakelin'i Herman Shopian tamin'ny volana Mey 2017 ny fatiny rotiky ny bala. Nilaza ireo manampahefana ao amin'ny tafika fa voarohirohy tamin'ny fahafatesany ny roa tamin'ireo lazaina ho mpitolona maty tamin'ny fifandonana ny 1 Aprily 2018 teo.
Vakio eto: Ny Vahoaka Kashmiri Mifanandrina Amin'ny Fanjakana Indiana
Nandritra ny telopolo taona farany, nangataka ny hanan-jo hanao referandaoma momba ny fahaleovantenany ireo vahoaka ao amin'ny Lemak'i Kashmir. Tamin'izany fotoana izany, olona maherin'ny 68.000 no maty nandritra ny fitroarana tampoka sy ny famoretana taorian'izay. Voampanga ho nanao fanitsakitsahana zon'olombelona marobe ny tafika Indiana, anisan'izany ny fanjavonana noterena nihatra tamin'ny olona maherin'ny 8.000 .
Hita taratra eto ny vehivavy Kashmiri iray manandratra ny teny filamatra eny am-baravarankely raha niandry teny ivelan'ny tranon'ilay mpikatroka maty nandritra ny fitifirana niaraka tamin'ny tafi-panjakana tao atsimon'i Kashmir ireo olona nisaona. Sary tao amin'ny Instagram avy amin'ny mpanoratra.
Nilaza ny tatitra fa nampiasa bala firaka ny mpitandro ny filaminana mba hitifirana ireo mpanao fihetsiketsehana; Olona maherin'ny 150 no naratra, ary maro tamin'izy ireo no tratran'ny bala mitsipotipotika, ny sasany tamin'izy ireo voa tamin'ny masony. Tamin'ny fitroaran'ny taona 2016, tovolahy sy tovovavy an-jatony no lasa jamba tanteraka na tamin'ny ampahany noho ny bala mitsipotipotika nampiasain'ny tafi-panjakana .
Niantso mba hanaovana ny Lemak'i Kashmir Valley ho tanàna maty manerana ny faritra tamin'ny 2 Aprily lasa teo ireo mpitarika ny fifaharana Kashmirita; taorian'io fiantsoana io dia nanakatona ny aterineton'ny finday ny manampahefana ary nametraka ny ora tsy ahafahana mifamezivezy. Nanome baiko hanakatonana ny sekoly sy ny kolejy ihany koa ny governemanta ary nofoanana na nahemotra ny fanadinana maro noho ny fihenjanan'ny toe-draharaha.